true targets /zu-ZA/tools-for-life/targets/steps/administrative-scale.html read 4 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/targets_zu_ZA.jpg Ama-Targets kukanye nemiGomo
Lapho ubhala ama-targets ohlelo, kunamaphuzu athile okufanele uwagcine engqondweni. Ukusebenzisa la maphuzu kuzokusiza ukuthi izinhlelo zakho zenziwe futhi kwenze amacebo akho abe iqiniso.
Iphuzu elilodwa ukuthi i-target lokuqala kuhlelo kufanele kube yi-target lokukhiqiza. Lolu hlobo lwe-target lubeka inani lezinto, imvamisa ngokumelene nesikhathi. Isibonelo se-target lokukhiqiza kungaba “Zonke izincwadi zokwamukela zithunyelwa nge-imeyili kwabafundi ngekwindla ezayo zingo 15 kuMbasa.”
Kodwa noma ngabe i-target lokuqala kufanele kube yi-target lokukhiqiza, empeleni awukwazi ukubhala i-target lokukhiqiza lilodwa. Isizathu salokhu ukuthi othile kuzofanele enze i-target. Lapho usunomuntu lapho ozokukwenza, usuqale ukuhlela izinto. Ngakho-ke okunye ukuhlela kufanele kube lapho ekuqaleni.
Isibonelo, kwi-target yokukhiqiza engenhla, ake sithi kukhona umuntu oyedwa manje ongakwazi ukwenza umsebenzi wokuthumela izincwadi zokwamukela abantu, kodwa uyazi ukuthi kuzothatha abantu abaningna ukuthola zonke izincwadi ezithunyelwe ngezi 15 kuMbasa. Ngakho-ke kuzofanela ukuthi ungeze i-target kulolu hlelo ukuze uthole abanye abantu ababili ukuthi nabo basebenze ngokuthumela le izincwadi.
Ngakho-ke, i-target yokuqala kungaba empeleni kunoma ngubani okhona manje ukuqala ukubhala izincwadi ezibhaliwe futhi zithunyelwe nge-imeyili. Futhi i-target yesibili kuzoba ukufaka abantu abaningi kulomsebenzi. Ngaphandle kwalokho ukukhiqizwa ngeke kuqhubeke.
Ngakho-ke kufanele kube nokuhlela okusheshayo okuzoletha ukukhiqizwa.
Ama-targets kufanele abenganqunyelwayo (abe ngawenzekayo, aqedekayo futhi aphelayo).
Kwesinye isikhathi ungabona i-target ibhaliwe ukuze inganqunyelwa empeleni. Lokhu kuvame ukwenzeka ngoba i-target elinjalo alinikezi senzo esithile umuntu angasenza.
I-target efana nokuthi “Gcina ubudlelwano obunobungane kanye nemvelo (indawo)” ayitholi umuntu ukuthi enze isenzo, ngakho-ke ayinqunyelwa.
Manje, uma i-target lisho okuthile okufana nokuthi “Vakashela uNkk. Smith no Mnu. Jones futhi ubatshele nge…” nokunye, leso yisenzo ESINGENZIWA.
Ama-targets kufanele abenganqunyelwayo (abe ngawenzekayo, ngaqedekayo futhi aphelayo). Izinhlelo zakho zizoba nethuba elingcono lokufeza lokho ofuna zikwenze lapho ama-targets ohlelweni engenziwa aqedwe.
Njengoba usufundile izinhlobo zama-targets nokuthi ungazibhala kanjani, manje usungahlanganisa lama-targets futhi ubhale lonke uhlelo.
Ngezansi uzothola izinhlelo ezimbili eziyisibonelo. Kubandakanya izinhlobo zama-targets ezahlukahlukene ezakha uhlelo olujwayelekile. Zibonisa futhi ukuthi ama-targets ahlelwe kanjani ukuthi axhumane futhi abe ngokulandelana okuyikho.
Uhlelo ngalunye lwesampula lunenjongo ethile. Ngohlelo lokuqala, uzofunda ukuthi ama-targets asetshenziswa kanjani nokuthi ungenza kanjani uhlelo. Ngohlelo lwesibili, uzofunda ngokukhiqiza.
Ngokwenza lezinhlelo ezimbili, i-target elilodwa ngesikhathi, uzobona ukuthi ukuhlelela i-target izinyathelo ngezinyathelo zenza kanjani izinto zibe lula futhi zisebenze. Uzobona nezinhlobo ezahlukahlukene zama-targets nokuthi zisebenza kanjani ndawonye.
Uma usuziqedile, uzokwazi ukubhala nokwenza izinhlelo zakho. Lokho kuzokukhombisa ngokusobala ukuthi ungafeza kanjani imigomo nezinjongo zakho.
Isampula yoHlelo #1
Injongo: Ukuze ufunde ukuthi ama-targets asetshenziswa kanjani nokuthi wenze kanjani uhlelo.
Ama-Targets Amakhulukazi: Yenza enziwe.
1. Funda loluhlelo kanye bese wenza i-target ngalinye.
1. Thembeka ekwenzeni lokhu.
2. Kwenze konke.
3. Hlola ngakunye uma usuqedile.
1. Khumula isicathulo sakho kwesokudla. Bheka ngaphansi kwesicathulo. Qaphela ukuthi kunani. Sigqoke futhi.
2. Hamba uyophuza amanzi.
3. Thatha ishidi lephepha. Dweba kulo umbuthano wezindilinga ezintathu (izindilinga ezidwetshwe enye ngaphakathi kwenye ezihlanganyele isikhungo esifanayo). Iphendule ibheke ngobuso phansi. Bhala igama lakho ngemuva. Idabule bese ubeka izingcucu zaphepha encwadini.
4. Khumula isicathulo sakho sobunxele. Bheka ngaphansi kwesicathulo. Qaphela ukuthi kunani. Sigqoke futhi.
5. Thola umuntu bese uthi sanibonani. Buya bese uzibhalela wena umyalezo uphawula ukuthi bawamukele kanjani.
6. Khumula izicathulo zombili bese uzishayanisa izithende ndawonye kathathu bese uyazigqoka futhi.
7. Bhala uhlu lwamaphrojekthi empilweni yakho oshiye engaphelele noma ongawenzanga nhlobo.
8. Bhala ukuthi kungani lokhu kunje.
9. Hlola loluhlelo ngokucophelela ukuze uqiniseke ukuthi ukwenze konke ngokwethembeka.
10. Yenza uhlu lwama-realizations akho, uma ekhona, ngenkathi wenza lolu hlelo.
11. Nquma noma ulwenzile ngokwethembeka lolu hlelo.
Isampula yoHlelo #2
Injongo: Ukuze ufunde mayelana nokukhiqiza.
I-Target Enkulukazi: Ukuze ukhiqize ngempela okuthile.
1. Thola ipensela namashidi amahlanu ephepha.
2. Hlala endaweni ethile ukuze ukwazi ukwenza loluhlelo.
1. Funda i-target esebenzayo bese uqiniseka ukukwenza konke ngaphambi kokuqhubekela phambili.
2. Khiqiza empeleni lokho okufanele.
1. Bukeka umatasatasa ngaphandle kokwenza lutho.
2. Kwenze futhi, kepha manje kholiseka kakhulu (thola umuntu ukuba akholelwe ukuthi okuthile kuyiqiniso).
3. Sebenza umkhiqizo womsebenzi noma umsebenzi wakho. Thola usizo komunye umuntu njengoba kudingeka.
4. Qondisa amaphepha edeskini yakho.
5. Thatha iphepha leshidi lokuqala njengokushiwo ngenhla nge-target eyisisekelo. Bhala ukuthi unombolo 4 ngabe ukukhiqiza noma cha.
6. Thola iphepha noma umlayezo onganikeli nganoma iyiphi indlela ekukhipheni kwakho umkhiqizo wakho.
8. Thatha ishidi lesibili elibiziwe kwi-target eyisisekelo. Bhala ukuthi kungani isenzo esinyathelweni 7 sinengqondo ngokuphelele.
9. Thatha ishidi lephepha lesithathu bese udweba ukuthi ukwamukela kanjani ukuxhumana emsebenzini noma umsebenzi wakho.
10. Thola umkhiqizo owodwa oqondile womsebenzi wakho, ophelele, wekhwalithi ephezulu.
12. Buyekeza ama-targets asebenzayo ukuze ubone ukuthi iyiphi eyenza uzizwe ungcono kakhulu.
13. Thatha ishidi lephepha lesine ubhale ukuthi ukukhiqizwa kuyisisekelo sokuziphatha yini (isimo sengqondo nomqondo womuntu noma seqembu nenani lomdlandla abalikhombisayo ngomsebenzi ababambe iqhaza kuwo).
14. Thatha ishidi lephepha lesihlanu, ulisebenzisele ishidi lokumboza bese ubhala isifinyezo sohlelo.
15. Qaphela ukuthi usuqede uhlelo.